Mozika “électro-pop”: hiaka-tsehatra ao amin’ny IFM ry Rocky | NewsMada
Mozika “électro-pop”: hiaka-tsehatra ao amin’ny IFM ry Rocky
Mitondra zava-baovao hatrany ny Institut Français de Madagascar (IFM). Mpanakanto manana ny talenta miavaka NY Rocky. Tsy nofihininy irery izany fa hozaraina ho an’ny Malagasy amin’ny alalan’ny fampisehoana an-tsehatra.
Rocky, tarika mpanao mozika, avy any Lille-Frantsa. Angamba, vitsivitsy ihany ny mahafantatra izany tarika izany, raha ny eto amintsika manokana. Ny 30 novambra izao, ao amin’ny Institut français de Madagascar (IFM) etsy Analakely, ny fotoana ihaonana amin’izy ireo ary indrindra, hanokafana ny sofina sy ny fo amin’ny mozika entin’ny tarika, ny “électro-pop”.
Niorina tamin’ny taona 2011 ny Rocky, ambaran’ny mpitsikera eo amin’ny tontolon’ny mozika fa tarika tsy mitovy amin’iza na iza. Ahitana mpikambana efatra ny tarika ka iray ihany ny vehivavy, i Inès Kokou, teratany togoley, manana feo miavaka amin’ny maro. Tsy misy tarika mitovy amin’ny Rocky tokoa satria fantatra fa “mandonabe” ny gadona lalaovin’izy ireo.
Manao fitetezam-paritra, amina firenena maromaro, ny tarika amin’izao fotoana izao. Tsy ho diso anjara ny mpankafy mozika eto Madagasikara, indrindra ny eto an-dRenivohitra. Hampahafantarin’izy ireo mandritra io seho io ireo hira ao anatin’ny rakikira voalohan’ny tarika, mitondra ny lohateny hoe “Soft Machines”.